DEBIAN 10: တပ်ဆင်ပြီးနောက်မည်သည့်အပိုပစ္စည်းများသည်အသုံးဝင်သနည်း။ | Linux မှ
ဤဆောင်းပါးသည်အဆက်ဖြစ်သည် (ဒုတိယအပိုင်း၏ လဲ tutorial ဆက်ကပ်အပ်နှံ DEBIAN GNU / Linux Distro, ဗားရှင်း ၁၀ (Buster)ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်များစွာသောအခြားသူများအတွက်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
ဒုတိယအပိုင်းကိုဒီပြပါမယ် အပိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များ (applications များ) အဆိုပါများမှာ အကြံပြုခဲ့သည် နောက်ကိုလိုက်ရန် ပိုကောင်းအောင် (ဖြည့်စွက်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပကြီးမြတ် Distros DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19.
ကတည်းက, ဒီသင်ခန်းစာစီးရီး၏ပထမအပိုင်းကိုခေါ် "ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ" အာရုံစိုက်ခဲ့သည် မရှိမဖြစ်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် packages များ တစ် ဦး အတွက်လိုအပ်သော ပထမ ဦး ဆုံး update ကို, စိတ်ကြိုက်နှင့် optimization ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ချိန်က install လုပ်ပြီးသည်နှင့်ပထမအကြိမ် post-installation အဆင့်များ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးကို ကိုးကား၍ အောက်ပါတို့ကိုသတိရပါ။
1 DEBIAN 10: တပ်ဆင်ရန်အသုံးဝင်သောအပိုပစ္စည်းများ
1.1 Native Games application များ
1.5 ရုံးသုံး application များအတွက်အထောက်အပံ့
1.6 Windows HW နှင့် SW လိုက်ဖက်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်
1.7 Computer HW အတွက်ပံ့ပိုးမှု
1.9 Bluetooth ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများအတွက်ပံ့ပိုးမှု
1.10 USB အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများအတွက်အထောက်အပံ့
DEBIAN 10: တပ်ဆင်ရန်အသုံးဝင်သောအပိုပစ္စည်းများ
Native Games application များ
ရည်မှန်းချက်: retro console emulators တပ်ဆင်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: အခြေခံဗွီဒီယိုဒရိုင်ဘာပံ့ပိုးမှု၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: များသောအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော audio driver များ၏အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ ကွန်ပြူတာများပေါ်တွင်အသံနှင့်အသံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုအပ်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စာကြည့်တိုက်များ။
ရည်မှန်းချက်: ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လိုအပ်သော driver များ၊ application များ၊ add-ons များနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏အခြေခံအထောက်အပံ့ကို install လုပ်ပါ။
ရုံးသုံး application များအတွက်အထောက်အပံ့
ရည်မှန်းချက်: ရုံးသုံး application များ၊ add-ons များနှင့်ဖောင့်များအတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
Windows HW နှင့် SW လိုက်ဖက်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်
ရည်မှန်းချက်: အဓိကအားဖြင့် MS Windows ၏အခြား Operating Systems ၏ HW နှင့် SW နှင့်လိုက်ဖက်သောအရာများအတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုတပ်ဆင်ပါ။
Computer HW အတွက်ပံ့ပိုးမှု
ရည်မှန်းချက်: ယေဘူယျအားဖြင့်ကွန်ပျူတာများ၏ HW နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: Intel နှင့် AMD ပရိုဆက်ဆာများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိစေရန်အခြေခံ CPU ညွှန်ကြားချက်များပံ့ပိုးမှုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: ပန်ကာများအပါအ ၀ င်ကွန်ပျူတာ၏ဒြပ်စင်များ၏ဗို့အား၊ အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကိရိယာများနှင့်ယာဉ်မောင်းများ၏အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုတပ်ဆင်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများ (WiFi) ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြေခံယာဉ်မောင်းအထောက်အပံ့ကိုတပ်ဆင်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: ကွန်ပျူတာ၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများ (ဘလူးတုသ်) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခြေခံဒရိုင်ဘာပံ့ပိုးမှုကိုတပ်ဆင်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော USB အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများကိုစီမံခြင်းအတွက်အခြေခံ application နှင့် driver အထောက်အပံ့ကိုတပ်ဆင်ပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဤ "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဘာအကြောင်းလဲ အပို application များ အပေါ်ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ် GNU / Linux Distros «DEBIAN y MX-Linux»၂၀၂၀ အတွက်၎င်း၏လတ်တလောနှင့်လက်ရှိဗားရှင်းများတွင်အောင်မြင်ရန် «actualizarlas y optimizarlas»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » DEBIAN 10: တပ်ဆင်ပြီးနောက်အပိုထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်များသည်ဘာလဲ။
အယ်လ်ဘာတို Guerra ဟုသူကပြောသည်
pdftk သည်ကျွန်ုပ်ကို command line မှတစ်ဆင့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတည်း၌ pdf ဖိုင်များကိုစုစည်းရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
pdftk file_0001.pdf file_0002.pdf file_0003.pdf ကြောင် output file_123.pdf
Alberto Guerra အားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alberto ။ သင့်ရဲ့အလှူငွေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် PDF ဖိုင်များကိုအဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် applications များ (packages များ) မထည့်ထားကြောင်းသတိပြုမိသောကြောင့်၎င်းဆောင်းပါး၏ Office for Support applications အပိုင်း၌၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဤမျဉ်းကိုထည့်ပါ apt install pdfarranger pdfshuffler pdftk
ကျန်တဲ့2ကတော့အတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် graphical user interface (GUI) ကပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Debian ကမ်ဘာပျေါမှာစချင်တယျ
ဟယ်လို!။ ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ Debian 10, plasma KDE ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးကတည်းကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအများစုပြproblemsနာမရှိဘဲ install လုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုငါ install လုပ်မခံခဲ့ရသောအချို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည့်ပြproblemsနာများကိုအသေးစိတ်ပေမယ့်။
alsa-firmware-loader package ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။
E: Alsa-firmware-loader package ကိုရှာမရနိုင်ပါ
ထိုအအခြားသောအခြား packages များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက် libfaac0, amd64-microcode, firmware-atheros, firmware-b43-installer, firmware-b43legacy-installer, firmware-bnx2, firmware-bnx2x, firmware-brcm80211, firmware-intelwimax, firmware - iwlwifi၊ firmware-rink၊ firmware-realtek၊ bluez-firmware ။
RubenMTL ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Package တစ်ခုချင်းစီကိုထပ်မံစစ်ဆေးရန်နှင့်လက်ရှိရှိပြီးသား package တစ်ခုစီကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန် DEBIAN 10.3 ကိုမကြာမီ install လုပ်မည်။
ရပါတယ်!။ ကောင်းတယ် !! မင်းရဲ့အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ပိုစတာတစ်ခုမှာ hannah-foo2zjs အထုပ်နှင့်အတူဖြစ်သည်။
hannah-foo2zjs အထုပ်ကိုမရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အချို့သောအထုပ်များက၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထုပ်သည်ပျောက်နေ၊ ခေတ်မမီတော့သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်အချို့မှသာရနိုင်သည်။
အီး: hannah-foo2zjs အထုပ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမရှိပါ။
ttf-mscorefonts-installer၊ winetricks, playonlinux, iucode-tool များပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံး Terminal မှပြန်လည်စတင်လိုပါက power ခလုတ်မှအမှတ်အသားပြုပြီးအမှတ်အသားကိုပါပိတ်ထားရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ program ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါငါဒီတစ်ခေါက် desktop ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီး notebook ပေါ်က button ကိုထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ရ ဦး မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် desktop မှပြန်လည်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုအချိန်မရွေးရှိပါကခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
RubenMTL ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး တစ်ခုခုစီမံခန့်ခွဲမှု (ACPI) နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ 🙁
ဒရာမာမရှိပါ၊ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်း !!